Ndinogona here kuona nokukurumidza zvinhu zvakatsvakurudzwa kuAmazon?
Mhinduro shoma ndeyekuti, unogona. Uye hazvisi nyore kuti uwane zvinhu zvakatsvakurudzwa kuAmazon kuti uzviise mumatambudziko ako uye pakupedzisira unosangana niche iyo inoda zvakakwana. Ann unoda kuti uve nekodzero yakakodzera kana imwe-stop stop platform inobata zvose zvido zvako maererano nekukwikwidzana nekutsvaga nekutsvaga hukuru hunoshanda metrics kuAmazon. Asi zvakadini kana ndikataura kuti kunyange pamusoro pekutsvakurudza nekutsvaga zvishandiso chete chikamu chiduku chiduku chikuru chine zvinyorwa zvose zvitsva zvekutengesa zvisati zvafukurwa nokuda kweshumba yevatengesi vachitengesa uko - women's designer winter hats. Saka, pasi apa ndichakuratidza dzimwe nzira dzakanaka kuti iwe uwane zviri nyore zvinhu zvakatsvakurudzwa kuAmazon uye uwane mazano, niche mazano, pamwe nemafungiro akazara uye manzwiro ekutengesa izvo zvinogona kuita kuti iwe utengese kushanda pane iyo nzvimbo yakawanda yepamusika .
Jungle Scout items on Amazon. Ndezvipi zvigadzirwa zvino zviri pamusoro pezvinodiwa nevatengi? Ndezvipi zvigadzirwa zvinhu zvakanyanya kutsvakwa kuAmazon? Ndezvipi zvinyorwa zvinowanikwa pakuzivikanwa? Chii chaunogona kuita zviri nani kudarika vapikisi vako vepedyo? Pane here kukanganisa uye zvisarudzo zvisina kunaka zvakatorwa nevatengi vemisika yako kuitira kuti iwe usambotambirwa zvakadaro? Nzira yekuwana sei ikozvino yakavanzwa mari inowanikwa uye zvimwe zvinhu zvinotyisa zvinotengeswa? Jungle scout niche hunter ndiyo chaiyo yekupa iwe mhinduro dzose dzinodiwa kuti urege kubva mukukwikwidza kwechisimba uye kutungamira kuAmazon.
Kuchengetedza Mitengo Pamutambo
Keepa - ndiyo yako yepamusoro mutengo wekutengesa kuti uve nemifananidzo yakazara yezvinokosha zvinoonekwa nokuda kwezvinhu zvakatsvakurudzwa kuAmazon (zvine archive nhoroondo inowanikwa kuti inobata maitiro ekutanga anotyaira mhizha ye ecommerce uye kuderedza-kutumira bhizinesi). Iyi inonyatsoita sangano reInternet inotsigirwa mune 11 nyika dzakasiyana dzinouya nemitauro yakawanda kuti ikubatsire nemuenzanisi wekutengo, kutengesa kwematengo, kuwanikwa kwezviziviso, zvikwereti zvepamusoro zvematengo emakore, pamwe chete nezvinobva kuAmerica zvinokosha .
Kuenda kunotsvaga kuMakwikwi nokuda kwemashoko
Nhamba - ishoko rinonyanya kushanda uye chigadzirwa chekutsvakurudza. Shandisa iyo kuti uwane zvinhu zvakanyatsotsvakwa kuAmazon, maererano nemashoko akakurumbira akakurumbira ayo makwikwi ako akakodzera - uye wapedza. Ichi chishandiso chinoshandawo pakugadziridza mapepa ako ePay-Per-Click neyakanakisisa kuita mazwi makuru, pamwe nekukuratidza iwe unogona kuvimbisa niches nechepamusoro yepamusoro mubhadharo pamusoro pemakwikwi asina kukwana. Mukuwedzera, Maitiro akaonekwa kuti anonyanya kubatsira paanosvika pakuchengetedzwa kwemungozi uye zvose zvinotyisa kuverenga kuenzanisa kutengesa kwako zviyero uye zvinyorwa, kana somuenzaniso, zvine tarisiro yakajeka yekubatsirwa pashure peFBA.